Mameseji hofori Line anovhura crypto Exchange
Japanese Mobile Zirume INORATIDZA rave kushanda zvapamutemo kushanda kwayo Singapore anotsanangura cryptocurrency Exchange BITBOX pamwe rutsigiro 30 cryptocurrencies kusanganisira Bitcoin & Litecoin.
The crypto-kuti-crypto Exchange vachaitwa kuwanikwa munyika yose vose vanoshandisa - richiwanika 15 mitauro - pamwe chikuru kunze ose Japan uye United States, nokuda pamutemo zvipingamupinyi. With AZVAKAITIKA itsva foray kupinda cryptocurrency nzvimbo, CEO Takeshi Idezawa akataura: "AZVAKAITIKA hwakavaka mukurumbira wayo kupa kukuru munzanga chiitiko vanoshandisa dzedu, uye ikozvino isu kuuisa kuti anoziva nyika digitaalinen zviratidzo yedu BITBOX exchange. "
IBM zvikwata pamwe Columbia University kuti vomurova blockchain tsvakurudzo centre
Technology Zirume IBM akaita yakatanga itsva tsvakurudzo centre kuburikidza kudyidzana pamwe Columbia University mu kutama kunangidzirwa kuti vavandudze blockchain kushanda kukura uye dzidzo zvirongwa.
Muzinda iri muna Manhattan ritenderane of Columbia University muNew York City uye kuda, nezvimwe zvinhu, incubate blockchain mafomu kuburikidza mubatanidzwa zvedzidzo uye neunyanzvi, zvakasimba akati. Dare vakazvitsaurira Kunoumbwa vose Columbia fakaroti nhengo uye IBM zvokutsvakurudza masayendisiti kuchatanga aongorora vaitaura kuti blockchain “kwakarongwa budiriro, mabhizimisi zvirongwa uye zvirongwa zvokutsvakurudza” Papera gore rino.
World yarwo wakakombama wokutanga crypto Exchange anovhura kuJapan
Munyika kubhengi wakakombama wokutanga cryptocurrency Exchange zvino rakazaruka kuruzhinji. SBI Holdings akati basa zvino akazaruka zvizere nokuda vanoshandisa makore kubva 20-70 vanoga- Japan. The Exchange, vaimudana VCTRADE, inotsigira Yen anotsanangura zvokutengeserana maviri nokuda Bitcoin.
Yanhasi pachena kanda anouya kusvika makore maviri pashure SBI Holdings kutanga akazivisa kuti zvaizova kuvaka Exchange muna October 2016, pamwe kuchikuva kugamuchira chinhu uchishandisa rezinesi kubva muJapan zvemari Gwaro, Financial Services Agency, mukupera rapera. The zvakasimba akazvitaura rave kushanda kurera nhanho yomunyika kuchengeteka asati vomurova.
US regulators uchibvumira Coinbase acquisitions zvichiita kuti kunyora kuchengeteka zviratidzo
Coinbase, chimwe chezvinhu mukurumbira cryptocurrency platforms, Vakati akamuka mitema chiedza kubva US watchdogs kuenda mberi nevatatu pakati acquisitions kuti kuchaita kuti ave mumwe yokutanga federally yaidzorwa yokuitira vanotengesa digitaalinen mari yechimiro chedungamunhu kuva kuchengetedzeka.
Coinbase watopiwa kutungamirira neHurumende regulators pamberi, asi ichi chinoratidza yeUnited mvumo yavo yokutanga sezvo pavanozosvitsa chinangwa anodawo sechinhu federally yaidzorwa bhuroka-munyengeri. Izvi zvinobvumira Coinbase kushanda sechinhu vakanyoresa inivhesitimendi chipangamazano, uye kupa nzira zvokutengeserana hurongwa, nokudaro anokudza kuwanda mabasa zvinogona kupa kuti vatengi, uye unhu unogona kunyora pamusoro wayo papuratifomu.
The CFA bvunzo ari kuwana crypto chikamu gore rinouya
The akaipa zvakaoma Chartered Financial dzezvematongerwo (CFA) bvunzo kuda kuwana kuti makasimba zvikuru. vaimudana “kupfuura utsinye bvunzo munyika rezvemari” ne Business Insider, chikamu matatu-bvunzo rokufukidza nzvimbo dzinoverengeka siyana rezvemari - zvose rinorema chikuru nezvetsika - kuda kuwedzera misoro pamusoro cryptocurrencies uye blockchain sezvo examinable mashoko August 2019.
Stephen Horan, yamaneja kungopa dzidzo uye zvidzidzo nokuda CFA Institute kutarisira CFA bvunzo, akati panyaya: “Takaona munda crypto okuchembera nokukurumidza kupfuura vamwe minda uye nesuwo akazviona sezvo Kunogara ... Iyi haisi kuchipfuura kwechokwadi.”
Korean crypto Exchange Bithumb meso Japan uye Thailand kuti kuwedzera
South Korean Exchange Bithumb akazivisa kuti vasununguke nemahofisi matsva Japan uye Thailand. Bithumb ikozvino hwakamirira mvumo kubva Japanese Financial Services Agency (FSA) uye Thai kuchengetedzeka uye Exchange Commission (SEC).
Bithumb akatsanangura kuti akasarudza Thailand nokuti e-zvokutengeserana uye zenze hwemberi mukugadzira indasitiri zvikuru kushingaira munyika. Bithumb angatanga remapazi ayo muThailand kare October 2018. Bithumb ndiye tariro kuti ayo chikumbiro Japanese ichanzwiwa uye hofisi itsva tanga basa rayo kuJapan muna February 2019.
Kraken Daily Market Mushumo 16.07.2018
$154M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Blockchain News 16 Ndira 201...
Blockchain News 27 Ndira 201...